नेकपामा अाेराली लागेका ईश्वर पाेखरेल : न अाेलीका, न प्रचण्डका ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
नेकपामा अाेराली लागेका ईश्वर पाेखरेल : न अाेलीका, न प्रचण्डका ?
कम्युनिष्ट कार्यकर्ता विचारमा स्पष्ट हुनुपर्ने तर्कसहित जबजको विकल्प नभएको ईश्वरठ पोखरेलको दावी छ । अरु कसैले नबोके पनि आफू जबजको विषयलाई नछाड्ने उनको तर्क छ । दुई पार्टी (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) को एकता घोषणा सभा नहुँदैदेखि पोखरेल पूर्वमाओवादीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । एकता घोषणाअघि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर मैदानमा उत्रिएका पोखरेल पछिल्लो समय जबजको विषयलाई लिएर कार्यकर्ता संगठिन गरिरहेका छन् । उनले पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुने विषयको पनि विरोध गर्दै आए ।
पूर्वमाओवादीकै कारण आफू महासचिवबाट हट्नुपरेको अनुभूति पोखरेलको छ । सोही कारण पनि पोखरेल पूर्वमाओवादी समूहप्रति आक्रामक देखिएको चर्चा पार्टीभित्र चलेको छ । अभिव्यक्तिकै कारण नेकपा वृत्तमा पोखरलेको प्रसंशा र आलोचना हुँदै आएको छ । पोखरेल पछिल्लो समय विशेषगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काउन्टर पात्रको भूमिकामा छन् । प्रचण्डका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्नेमा उनी पहिलो नम्बरमा आउँछन् ।
प्रचण्डले जनताको जनवाद, आलोपालो सरकारको नेतृत्व, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगायतका विषय उठान गर्दा पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ठाडै अस्वीकार गरे । यद्यपि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको विकसित रुप जनताको जनवाद भनेर सार्वजनिक रुपमै अथ्र्याएका छन् । तरपनि, पोखरेल भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई छाड्न नसकिने अडानमा छन् ishwor pokhrel
आलोपालो सरकारको नेतृत्वका विषयमा पनि पोखरेलले प्रचण्डको सशक्त प्रतिवाद गरेका छन् । शीर्षनेताबीच भएको समझदारीका विषयलाई बजारीकरण गर्नु उचित नभएको उनी बताउँछन् । पोखरेलको अभिव्यक्तिको विषय सचिवालय बैठकमा समेत चर्चा हुने गरेको एक नेता बताउँछन् । प्रचण्ड र पोखरेलबीच विवाद गराएर ओली सर्वमान्य नेता बन्न खोजेको विश्लेषण समेत नेकपाभित्र हुने गरेको छ ।
पोखरेल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रत्येक भनाइ र गतिविधिको प्रतिरक्षामा उत्रन्छन भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड समूहप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिन्छन । पार्टीका कतिपय नेता पोखरेल ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन् । तर, जब अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिन्छन् तब पोखरेल किनारा लाग्छन् । यसको एक उदाहरणको रुपमा महासचिवबाट घटुवालाई लिनुपर्ने तर्क गर्छन नेकपाका एक नेता । ‘ओली प्रचण्ड मिल्दा जसरी महासचिव गुमाउनुपर्यो । आफूभन्दा जुनियर विष्णु पौडेल महासचिव बन्ने अवस्था बन्यो । फेरि पनि ओली र प्रचण्ड मिल्दा पोखरेलले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नेकपाका एक शीर्ष नेता भन्छन् ‘एउटा अध्यक्षको प्रतिरक्षा र अर्का अध्यक्षको भण्डाफोरमा उत्रनु राम्रो पक्ष होइन ।’
केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालकै पुस्ताका पोखरेलले अब पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्ने तर्क गर्ने पक्ष जबरजस्त जुर्मुराएको छ । तर, पोखरेलप्रति विशेषगरी पूर्वमाओवादी समूह आक्रोशित छ । सानो झुण्डलाई मात्र साथ दिने गरेको बताउँदै पूर्व एमालेको एउटा पंक्ति पनि पोखरेलप्रति रुष्ट छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेलको नेतृत्व स्थापित हुन कठिन रहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । पोखरेल अग्निपरीक्षामा हाम फालिसकेका छन् । यो परीक्षामा उनी स्थापित हुन्छन या विस्थापित भन्ने प्रश्नको जवाफ समयले नै दिनेछ ।